Pump Sringe Pump For Electrospinning na Kedu ihe ejiri Electrospinning mee
Kedu ihe bụ electrospinning? Electrospinning bụ usoro dị mfe ma dịkwa mma maka ịkwadebe nanomaterials, nke na -adabere na mgbagha electrostatic n'etiti ebubo elu iji nweta nanofibers na -aga n'ihu site na mmiri viscoelastic. Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ ihe ejirila nkwadebe nanofi nke ọma ...
Pump Peristaltic Pump Fluid maka Fermentation na Bioreacor
Ntughari na -ezo aka na usoro nke ndị mmadụ na -akwadebe mkpụrụ ndụ microbial n'onwe ha ma ọ bụ na -eduzi metabolites ma ọ bụ metabolites nke abụọ site na ọrụ ndụ nke microorganisms n'okpuru ọnọdụ ikuku ma ọ bụ anaerobic. Ịgba ụka bụ ụdị mmeghachi omume biochemical nke mmadụ na -ekpughere na ...
Ngwa nke mgbapụta Peristaltic na ọgwụgwọ mmiri mkpofu
Ngwa nke Pump Pistaltic Pump Plant na -arụ ọrụ mkpuchi mkpuchi mkpụrụ nke ụlọ ọrụ ugbo
A na -eji nfuli ihe na -ebute mmiri mmiri na -arụ ọrụ ugbo, bayotechnology, filtration, kemịkalụ, ọrụ gburugburu ebe obibi wdg. Ngwaahịa akwadoro 1, Lead Fluid BT301L smart flow peristaltic pump pump range range: 0.006 ...
WT300F-D Pump Peristaltic Pump Precision, Liquid Na-ejuputa nfuli nkenke site na mmiri ndu.
Mgbapụta njupụta dị elu dị elu, nfuli mmiri ndu sitere na mmiri ndu. Mkpuchi mmiri nkenke dị oke mkpa maka biopharmaceutical, ọgwụ, nnwale, nri na ọrụ. The biopharmaceutical, ọgwụ, ụlọ ọrụ nri nwere nkenke dị elu, obere-pulsation, yana chọrọ arụmọrụ dị elu maka fil mmiri mmiri ...
Kedu ihe mgbapụta mmiri peristaltic nke mmiri mmiri nwere ike ime maka nchọpụta nuleic acid?
Kedu ihe mgbapụta mmiri peristaltic nke mmiri mmiri nwere ike ime maka nchọpụta nuleic acid? Ọnọdụ COVID-19 dị ugbu a ka siri ike, ọtụtụ ebe agbasawanyela ule nke nucleic acid iji nagide ọrụ nke igbochi…
Otu esi edobe ọnụego mgbapụta nke mgbapụta mmiri na -agba mmiri
site na nchịkwa na 21-01-19
Otu esi edobe ọnụego mgbapụta nke nfuli mmiri na -ebute mmiri mmiri n'isiokwu ndị gara aga, anyị tụlere usoro ngụkọta oge nke mgbapụta peristaltic. N'isiokwu a, anyị ga -ewebata otu esi edobe ọnụego ọnụego mmiri ndu ndu ...
Pump Pistaltic nke na -ebute mmiri mmiri dị mma maka ụlọ ọrụ ọgwụ
Pump Pistaltic Pump dị mma maka ụlọ ọrụ ọgwụ na -ebute nfuli peristaltic nwere oke mmiri nke nwere ike izute njuputa mmiri na ọnụego dị iche iche. Gbaa mbọ hụ na ọrụ akọrọ, ọnụ ahịa mmezi dị ala, re ...